Osimiri Biarritz | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Francia, Osimiri
Otu n'ime osimiri ndị a kasị mara amara ma mara mma na Francia bụ Osimiri Biarritz, na Atlantic, nanị kilomita 32 site na ókèala Spain. O doro anya na ị maara ya ma ọ bụrụ na ị bi na Spain ị nwere ike ịga ezumike.
Ọfọn ọ bụ osimiri okomokoOké osimiri mara mma, ma ọ bụghị naanị banyere oké osimiri na ájá n'ihi na ka oge na-aga, gburugburu enwetawo ihe dị mkpa ma taa, osimiri na obodo ahụ mejupụtara ebe ndị njem na-enweghị atụ.
2 Osimiri Biarritz
3 Ihe ọzọ ị ga-eme na Biarritz
Ọ bụ obodo dị na Bay nke Bizcaya, n'ụsọ oké osimiri Atlantic na mpaghara Pyrenees, n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ France. Ọ malitere ịmalite na emepechabeghị emepe, nke sitere na aka nke ọrụ na-egbu egbu, yabụ na anụ a na-egosi na uwe aka ya.
Biarritz Ọ bụ obodo na-ebugharị ebili mmiri site na XNUMX ruo narị afọ nke XNUMXMa narị afọ sochirinụ malitere ikwu banyere ọgwụgwọ nke ikuku mmiri na ọghọm nke obodo ahụ gbanwere ruo mgbe ebighị ebi.
N'oge XIX narị afọ oge gboo njem malitere, aka na klas ụlọ ọrụ bourgeois na-apụta na ndị a ma ama, ọtụtụ n'ime ha bịara ebe a na-achọ ịgwọ ọrịa ha. Fọdụ na-ekwu na Victor Hugo nyere aha ya nke ọma n'ihe dịka 1843, site na ịkọ ya n'otu n'ime ọrụ ya.
Biarritz wee malite itinye ego na ọdịdị ya na a kụrụ ọtụtụ okooko osisi na osisi n'ugwu ndị nwere aja, a gbahapụrụ mgbidi site na steepụ na piers na etiti narị afọ nke XNUMX Nwanyị eze nwaanyị bụ Eugenie, nwunye Napoleon nke Atọ, wuru obí nke ya, na-emeghe ụzọ maka nleta site na eze nke Europe. Mgbe ahụ ụlọ ịgba chaa chaa na ndị America bara ọgaranya bịara, mana nke ahụ ga-abụ na narị afọ nke XNUMX.
Taa, ndị njem nlegharị anya, egwuregwu na-esonyekwa ndị njem nlegharị anya, yabụ Biarritz na-ewu ewu. Osimiri a dị kilomita isii n’ogologo na enwere ike ikwu ya ọzọ osimiri asaa, karịa naanị otu.
Na ụkpụrụ, anyị ga-ekwurịrị banyere Playa Grande de Biarritz, nke nwere mita 450 nke ájá na ọmarịcha sọọfụ. N’ebe a na-aga ogologo ije nke osimiri ahụ, e nwere ụlọ oriri na ọ seụ fishụ na azụ, azụ mmiri, cha cha na spa. Na eziokwu enwere ọtụtụ spa ebe nke ahụ na-enye ọgwụgwọ apịtị, mmiri mmiri na ihe ndị ọzọ.
A na-akpọ osimiri a dị ka Empress Beach n'ihi na Eze Nwanyị Nwanyị Eugenia wuru obí ya n'ebe a, mechaa bụrụ ụlọ nkwari akụ, Ụlọ nke Palais. Right ebe a bụ ebe oge mgbe e mesịrị A mụrụ sọọfụ na Europe.
Ọ bụ n’afọ 1956 ka onye nyocha ihe nkiri Peter Viertel bịara ịse ihe nkiri ya Anyanwụ na-awakwa, dabere na akwụkwọ akụkọ a ma ama site na Hemminway. Onye na-emepụta ihe Zanuck sooro ya na ọ bụ ebe ahụ ka ọ malitere n'ihi na Zanuck hụrụ n'anya sọfụ.
Otu afọ mgbe e mesịrị, ya na ụfọdụ ndị enyi ya, ọ tọrọ ntọala mbụ ụlọ ịgba egwu europe, Waikiki Surf Club. Kemgbe ahụ osimiri a na ụsọ osimiri Basque bụ ebe a na-enwe ọtụtụ sọọfụ asọmpi na asọmpi. N'ụzọ doro anya, ọbụlagodi taa enwere ụlọ akwụkwọ na-akụ mmiri ma ọ bụrụ na ị maghị ma chọọ ịmalite.
La Milady bụ osimiri ọzọ, buru ibu, na-ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto na ndị obodo. Nwere ike ịga ije n'okporo ụzọ ya wee nwee ọ enjoyụ n'echiche, ọ dị mma, ọ nwekwara ebe a raara nye ụmụaka. Nakwa osimiri a emegharịwo maka ndị nwere nkwarụ moto. N'ezie, na ebili mmiri ọ dị oke egwu. Ebe a na-adọba ụgbọala bụ n'efu, enwere ụlọ akwụkwọ sọfụ na kọfị.
Côte des Basques dị nnọọ elu were uru nke njirimara ya (ugwu gbara ya gburugburu na ị ga-ahụ ụsọ osimiri spain na ugwu ya). A machibidoro elu mmiri igwu mmiri ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ osimiri adịghị. Nwere ike ịpasa ụgbọ ala gị n'elu ugwu ahụ wee si ebe ahụ gbadata n'ụkwụ ma ọ bụ na obere minibus na-enweghị ego, n'oge ọkọchị. N'oge a enwekwara nchekwa ruo elekere 6, 7:30 nke ehihie.
Port Vieux bụ obere osimiri dị jụụ nke di n’elu okwute di nkpuchi n’enweghị ihe ikuku na ebili mmiri. Ọ dị nso na etiti obodo na ọ bụ ya kpatara ya ọ dị mma maka ezinụlọ nwere obere ụmụaka. Mmiri na-adịkarị jụụ ma dị mma maka igwu mmiri. A na-enweta ya site na Canon Rock na Boucalot Rock, ọ bụ ezie na ọ bụ site na nke ikpeazụ ị nwere ike iji ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri jet. I nweghi ike ichu azu n’ime mmiri karie nari mita iri n’ise site n’osimiri.
N’okporo ụzọ enwere ebe a na-adọba ụgbọala n’efu n’oge oyi, na-akwụ ụgwọ n’oge ọkọchị. N’ebe dị nso bụ ebe a na-adọba ụgbọala n’okpuru ala. Enwere obere bọs na-akwụghị ụgwọ site na etiti nke na-ahapụ gị ebe a, na-agba ọsọ n’agbata elekere iri nke ụtụtụ na elekere asaa nke abalị, ụlọ ahịa kọfị, klọb ịgba mmiri, na klọb igwu mmiri atọ. Ma lezie anya, ọ bụ osimiri ebe Anaghị anabata ịse anwụrụ: Peeji tabac.
Miramar Beach na-ewu ewu na ndị bi na ya n’ihi na ọ bụ osimiri mara mma ma dịkwa jụụ. Imirikiti mmadụ na-abịa mkpagharị, ọ bụ ezie na ịnwekwara ike ịga sọọfụ ma banye ahụ. N’ebe dị nso enwere ebe a na-adọba ụgbọala n’ala, ọ bụrụ na ụgbọ ala abata.
Ndị Marbella Ọ bụ ọzọ mara mma osimiri, na Mgbatị nke Côte des Basque. Ọ na-ekele nke ukwuu n'etiti surfers, ọ bụ ezie na ndị mmadụ nwere nkwarụ moto nwere ya mgbagwoju anya n'ihi na enwere nkume na steepụ. Nwere ike iji bọs rute ebe ahụ, nchekwa dị n'oge ọkọchị, ọ nwere ụlọ akwụkwọ sọfụ na ụlọ ahịa mgbazinye akụrụngwa yana ụlọ oriri na ọ /ụ /ụ / ụlọ nri.
Ihe ọzọ ị ga-eme na Biarritz
E wezụga osimiri, mmadụ nwere ike imekwu. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị na-eso ụmụ na mgbakwunye na họtel nwere ihe omume maka ha, enwere Museumlọ ihe nkiri Maritime nwere ihe karịrị ụdị mmiri 150 ka ha mara, na ha Akwarium.
Na Biarritz enwere ụlọ ọrụ ụlọ nke gụnyere Chọọchị Martin Martin ma ọ bụ Chọọchị Ọtọdọks nke Russia. a jee ije na mbadamba Ọ bụ ihe dị mkpa, ịhụ Hôtel du Palais mara mma, ụlọ ochie, ma ọ bụ nke mara mma Ebe Ste Eugenie.
I nwekwara ike were ije nke gastronomic gafere Halle Market ma obu Ahịa Les Halles, ịnwale ihe niile ma ọ bụ zụta ngwaahịa mpaghara: chiiz, nke a na-ahụkarị ọkpọkọ, Mmanụ a Montụ Montagne ... Ọ bụkwa ebe dị mma nwaa azu na azu na ibe, na nke ọ bụla n'ime ya ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị dị oké ọnụ, ma ọ bụ a skewer ma ọ bụ pintxo, na-arụsi ọrụ ike Rue des Halles.
Na echiche kacha mma Ndị na-enye ha ụlọ mbata, ụlọ ọkụ ya na mbara ala ya, nke ị nwere ike wee gafere ije Côte des Basques, ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ Na-egwu ya àjà, na nke ọ bụla anyanwụ dara, ebe kacha mma na-enwe kaadi ozi na otu iko mmanya French na aka.
Mgbe a bịara n’ịpụtụ obere, ị nwere ike gaa na ebe ntụrụndụ dị nso nke Saint Jean De Luz na Cibourne, nwere ụlọ mara mma, ọdụ ụgbọ mmiri, osimiri na ọtụtụ agba. Typicallylọ Basque a na-adịkarị na Cibourne mara mma ma nwee ike ikwu otu ihe ahụ maka Saint Jean De Luz, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanahụ njem nlegharị anya nke Biarritz.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » Osimiri Biarritz
Ugwu 10 kachasị elu n'ụwa